आमाबुबाको व्यस्तताले पनि बढाउन सक्छ बाल मनोरोग
काठमाडौँ – सामान्तया बालबालिकाका गतिविधिबारे अभिभावकले गम्भीररुपमा सोच्ने गरेको कमै पाइन्छ । बदलिँदो समय अनुसार आमाबुबाको व्यस्त समयले छोराछोरीसँग बिताउने समय कम दिँदा बालबालिकामा त्यसको असरले मानसिक तनाव पनि बढाएको छ । अझ कामकाजी आमाबुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई कम उमेरमै स्कुल पठाउने, पठ्न दबाब दिने, बजारको तयारी खाजा बढी खुव..
राती गर्नुहोस् यी काम, एक महिनामा तौल घट्नेछ
व्यस्त जीवनशैलीका कारण तपाईं दिउँसो तौल घटाउने कोसिस गर्न सक्नुहुन्न भने अब चिन्..
कपाललाई फुल्न र झर्नबाट यसरी बचाउनुस्
कपाल फुल्ने समस्याले धेरैलाई चिन्तित बनाएको हुन्छ । त्यसमा पनि कम उमेरमै कपाल फु..
सावधान ! यी १० गल्तीका कारण तपाईंलाई पनि हुनसक्छ मधुमेह
मधुमेहको समस्या बिस्तारै बढ्छ । यदि रगतमा चीनिको मात्रा बढाउने खानेकुरा खाइरहे य..
जाडोबाट वृद्धावृद्धलाई कसरी बचाउने ? जान्नुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरका सुझाव
जाडो बढेसँगै विशेष गरेर वृद्धावृद्धमा धेरै खालका रोग देखा पर्छन् । रोग प्रतिरोधा..
कागतीको बोक्राले अनुहार गोरो हुन्छ, यस्तो छ यसको १० प्रयोग
साधारणतया कागतीको बोक्रालाई फ्याकिन्छ । तर यो छालाको लागि थुप्रै प्रकारले फाइदाजनक हुने कुरा तपाईंमध्ये धेरैलाई थाहा छैन होला । यसका साथै कागतीको बोक्रा सफाइको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कागतीको बोक्रालाई घाममा सुकाउनुहोस् र यसको पाउडर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हामी कागतीको बोक्राका १० प्रयोग बारे बताउँदै छौं । कागतीको बोक्रला..
मधुमेहको लागि मात्र होइन, यी १० फाइदाका लागि पिउनुहोस् मेथीको पानी
मेथीमा एन्टिइन्फ्लामेटरी गुण पाइन्छ । यसको दानालाई पानीमा भिजाउँदा यसको पोषक तत्व कयौं गुणा वृद्धि हुन्छ । त्यसकारण मेथीको सट्टा यसको पानी धेरै फाइदाजनक हुन्छ । यसलाई बनाउनका लागि राती एक कप पानीमा मेथीको दाना भिजाउनुहोस्, बिहान खाली पेटमा यो पानीलाई छानेर पिउनुहोस् । दैनिक बिहान खाली पेटमा मेथीदानाको पानी खानुका फाइदाबारे यहाँ ..
एजेन्सी- सुन्दर, चम्किलो र आकर्षक अनुहार होस् भन्ने सबैको चाहाना हुन्छ । यसका लागि मानिसले धेरै प्रयास पनि गरेका हुन्छन् । तर सजिलो, सुलभ र छोटो समयमै घरायसी सामग्रीको प्रयोगबाट अनुहारमा सुन्दरता ल्याउन सकिन्छ । यी सामग्रीको यसरी प्रयोग गर्नुस् : –मुसुरीको दालको धुलो बनाउने, यही धुलोले दिनको एक पटक मुख धुने । जसले गर्दा [&helli..
दाँत कीराले खाने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? विशेषज्ञ डा. शीतल श्रेष्ठका टिप्स्
दाँत सौन्दर्यका लागि मात्र हैन, स्वास्थ्यका लागि पनि अति नै महत्वपूर्ण छ । खाएको खानालाई राम्रोसँग टुक्र्याउने र चपाई लयालु बनाउने काम दाँतले गर्छ । यसरी मसिनो बनाएर खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पच्ने हुँदा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व पनि प्राप्त हुन्छ । यसबाट सहज रुपमा पचाउन र विभिन्न रोगबाट बच्न सकिन्छ । दाँतलाई स्वस्थ, बलियो र [&he..
चिसो मौसममा गर्भवती हुँदा बढ्छ मधुमेहको खतरा
जो महिला चिसो मौसममा गर्भधारण गर्दछन् उनीहरुमा गर्भावस्थमा मधुमेहले सताउने खतरा अत्यधिक हुने एक अनुसन्धानले बताएको छ । यसमा आमा र बच्चा दुबैले विभिन्न प्रकारको जोखिमको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उक्त अनुसन्धानले बताएको छ । युनिभर्सिटी अफ एडिलेडका अनुसन्धानकर्ताहरुले आफ्नो यो अनुसन्धानमा पछिल्लो पाँच वर्षमा दक्षिण अष्ट्रेलियामा भ..
भिक्सका अचम्मित गरिदिने सात फाइदा
चिसो महिनामा भिक्स भेपोरब सजिलै घरमा पाइन्छ । तर यसले रुघा खोकी लाग्दा मात्र फाइदा पुर्याउने नभई यसका अन्य फाइदा पनि छन्, जुन थाहा पाउँदा अचम्मित पर्नुहुनेछ तपाईं । १. तपाईंको छाला र लुगामा थोरै भिक्स लगाउनुहोस्, लामखुट्टे तपाईंबाट टाढा रहनेछ । २. रुन चाहनुहुन्छ ? थोरै भिक्स आफ्नो आँखा वरिपरि लगाउनुहोस्, यसमा पाइने मेन्थोलले [&h..
नवजात शिशु बिरामी परे यो नम्बरमा फोन गर्नूस्….
नेपालमा पहिलो पटक नवजात शिशु स्याहार सल्लाह केन्द्र स्थापना, समस्या परे ५१५९२६६ नम्बरमा फोन गर्नुस् : भनिन्छ, हरेक सफलताका लागि कसैबाट प्रेरणा मिल्छ । इच्छाशक्ति र निरन्तर लगाव भएमा सोचेका धेरै सपना पूरा हुने तर्क छ वरिष्ठ नवजात शिशु विशेषज्ञ डाक्टर विनोदकुमार शाहको । वि.सं. २०३३ मा सिराहाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका शाह सानैदेख..
सधैं खुसी हुनेहरुले के खान्छन् ? थाहा पाउनुस् यस्ता ८ HAPPY FOOD
यस्ता थुप्रै खानेकुरा हुन्छन् जसले खराब मुड, डिप्रेसन र स्ट्रेसलाई भगाएर खुसी महसुस गराउँछ । मनोवैज्ञानिक डा. रुमा भट्टाचार्यका अनुसार खानपिनले पनि मानिसको मूडमा ठूलो असर पुर्याउने गर्दछ । खानेकुरामा पाइने भिटामिन, मिनरल्स, एसिड्स र केमिकलले दिमागमा रहेको हर्मोनलाई एक्टिभ गरेर हाम्रो मुडलाई प्रभावित गर्दछ । आज हामी तपाईंलाई यस्त..
गोरी हुन के प्रयोग गर्छन् जापानी ? थाहा पाउँदा अचम्मित हुनुहुनेछ
जापानीहरुको रंग जन्मजात नै सफा हुन्छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि जापानी महिला छालालाई नरम, गोरो र चम्किलो बनाउनका लागि चामलको पेष्टको प्रयोग गर्दछन् । त्यहाँ हज्जारौं वर्षदेखि चामललाई ब्यूटी ट्रिटमेन्टको लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । चामलमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले छालाका साथै कपाललाई पनि स्वस्थ राख्न सहयोग गर्दछ । कसरी प्रयोग गर्ने ?..
कागती काटेर बेडरुममा राख्नुहोस्, अर्को दिन हुनेछ यस्तो कमाल
यदि तपाईं बिहान ऊर्जावान् महसुस गर्न चाहुनुहन्छ भने तीनवटा कागती काटेर आफ्नो बेड नजिकै राख्नुहोस् । हरेक दिन यो नियम अपनाउनुहोस् र फरक देख्नुहोस् । कागतीको बास्ना निकै ताजा महसुस गराउने किसिमको हुन्छ र यसले निकै शक्तिशाली सफाइ गर्दछ । आज हामी तपाईंलाई कागतीका यस्तै रोचक प्रयोग बारे जानकारी दिँदै छौं । बेडरुममा कागती राख्दा [&hel..
जाडो तथा शीतलहरबाट जोगिन के गर्ने ? यसो भन्छन् विशेषज्ञ डाक्टर
जाडो मौसम सुरु भएको छ । जाडो बढेसँगै विशेषगरी तराईका जिल्लामा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल नगर्दा शीतलहरकै कारण बर्सेनि धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । जाडो वा शीतलहरबाट बसरी बच्ने विशेषज्ञ डाक्टर रवि महत यसो भन्छन्ः मौसम बढी चिसो हुनु वा शरीरलाई चाहिने तापक्रमभन्दा ज्यादै कम [&he..
यी हुन् मुटुमा समस्या हुने ६ कारण
डा. राजेन्द्र कोजू मुटुरोग विशेषज्ञ धुलिखेल अस्पताल विश्वमा मुटुरोगको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकमा त यसको समस्या झन् बढेको पाइन्छ । संसारभरका मुटुरोगीहरूलाई हेर्दा मुटुरोग लाग्नुमा ६ कारण प्रमुख देखिन्छन् : चुरोट सेवन उच्च रक्तचाप धेरै कोलेस्ट्रोल चिनीरोग मोटोपना पारिवारिक गुण यी ६ कारणमध्ये पनि सबैभन्दा..
हेयर मसाजले यसरी हुन्छ कपाल बलियो
चिसो मौसममा कपालको सुरक्षा गर्न निकै समस्या हुन्छ । जाडो धेरै बढ्दा टोपी तथा मफलर, स्कार्फले टाउको छोप्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तोमा कपाल कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । तर, सामान्य सुरक्षाका तरिका अपनाउँदा पनि कपाललाई सजिलै बलियो बनाउन सकिन्छ । कपाललाई आफ्नै घरमा बलियो तथा सुन्दर बनाउने तरिकाबारे के ३३ हेयर होटेलका प्रबन्ध निर्दे..
गहना राख्ने यो हो राम्रो तरिका
घनश्याम रिजाल, उपाध्यक्ष, नेपाल सुन–चाँदी कला व्यवसायी संघ गहनाको चमक कायम राख्न सुरक्षित तरिकाले स्टोर गर्नुपर्छ । धुलो, धुवाँ र अन्य धातुहरूको सम्पर्कले गहनाको चमकमा असर पर्न सक्छ । गहनाको वास्तविक चमक कायम राख्न भण्डारणका विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । गहनाको बनोट र प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्..
बाथबाट जोगिन प्राकृतिक उपचार
डा. दिनेशप्रसाद बराल सोहम योगा एन्ड नेचुरोप्याथी, लोकन्थली धेरै नेपालीलाई बाथरोगले सताउने गरेको छ । यो रोगको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिअनुसार पनि उपचार गर्न सकिन्छ । निश्चित सिद्धान्तमा आधारित औषधिरहित यो चिकित्सा पद्धतिमा पानी, माटो, हावा, घाम, आकाश पञ्चतत्वका माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । प्राकृतिक चिकित्साबारे वेद तथा अन्य प्राचीन..
क्षयरोगबाट कसरी बच्ने ?, विशेषज्ञ डाक्टरको टिप्स
विश्वमा मात्र होइन नेपालमा पनि क्षयरोगका बिरामी बढिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण खानपानमा ध्यान नदिनु र विलाशी जीवन शैली अपनाउनु हो । यो रोग के हो ? र कसरी लाग्छ विशेषज्ञ डाक्टर रमेश खरेल यसो भन्छन् : क्षयरोग भनेको के हो ? क्षयरोग वा ट्युबरकुलोसिस्लाई सामान्य बोलीचालीको भाषामा टीबी पनि भनिन्छ । सूक्ष्म जीवाणुको […]
खानामा समावेश गर्नुहोस् यी १५ खानेकुरा, कहिल्यै हुँदैन मधुमेह
व्यस्त र अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मधुमेहको ग्राफ तिब्र रुपमा बढ्ने गर्दछ । विशेषज्ञका अनुसार यदि दिनमा कम्तीमा ३० मिनेट हिँडे र स्वस्थ खानपिन गरे मधुमेहको खतराबाट मुक्त हुन सकिन्छ । डाइट क्लिनिक हेल्थ केयर प्रा.लि., दिल्लीकी निर्देशक र वेट लस स्पेसलिष्ट शीला शहरावतले यस्ता खानेकुराबारे जानकारी दिँदैछिन् जसले रगतमा चिनीको मात्रा..
मह एन्टी बायोटिक र एन्टी ब्याक्टेरियल हुन्छ भने लसुनमा एलिसिन र फाइबरजस्ता फाइदाजनक न्यूट्रियन्ट्स हुने गर्दछ । यी दुबै मिसाएर खाँदा तपाईंको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रोगबाट छुटकारा दिनेछ । आउनुहोस् यी दुबै मिसाएर खानुका १० फाइदाः तौल घट्नुः शरिर र लसुनको मिश्रणले शरिरको बोसोलाई कम गर्दछ । यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । मुटुको [..
कागती खाँदाका ८ फाइदा यस्ता छन् :
कागती स्वादिष्ट खानाका लागि धेरैले खान्छन् तर थोरैले मात्र स्वास्थ्यका लागि खाने गरेका छन् । स्वास्थ्य रहनका लागि कागती खानुका यस्ता छन् ८ फाइदा : १. नियमित कागतीपानी सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पुग्छ । कागतीले छालामा चमक ल्याउनुका साथै पेटसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ । २. तौल घटाउँछ : शरीरमा हुने चिल्लो पदार्थ न..
आँखा स्वस्थ राख्न गर्नुहोस् यी ११ काम
आँखा एउटा महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय हो । यसको आकार सानो तर भूमिका ठूलो छ । आँखा निकै संवेदनशील पनि छ । त्यसैले यसको सुरक्षामा सधैँ चनाखो हुन जरुरी छ । कसरी स्वस्थ राख्ने आँखा ? आँखारोग विशेषज्ञ डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेलले ११ टिप्स दिएका छन्: १. बिहान उठेपछि केहीबेर बाहिरी हरियाली तथा खुला आकाशमा आँखा डुलाउनुहोस् । […]